Isaziso se-copyright - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Isaziso se-copyright
Sithatha kabi ukwephulwa kwamalungelo obunikazi kakhulu futhi sizovikela amalungelo abanikazi be-copyright asemthethweni.
Uma ungumnikazi we-copyright yalokho okuqukethwe okuvela esizeni sethu futhi ungakugunyazi ukusetshenziswa kwalokho okuqukethwe, kufanele usazise ngokubhala ukuze sikwazi ukukhomba okuqukethwe okwephula umthetho okusolwayo futhi uthathe isinyathelo.
Uma ungasinikezi imininingwane edingekayo, ngeke sikwazi ukwenza noma yini, ngakho-ke uma ukholwa ukuthi impahla enamalungelo okushicilela iphuliwe noma yephulwe, sicela unikeze umenzeli wethu we-copyright imininingwane elandelayo ngokubhala:
1.) Isiginesha yomzimba noma ye-elektroniki yomuntu ogunyazwe ukwenza into egameni lomnikazi welungelo elikhethekile okusolwa ukuthi linokwephulwa.
2.) Khomba imisebenzi ene-copyright okuthiwa yokwephula umthetho, noma, uma imisebenzi eminingi enamalungelo obunikazi enziwe kwisayithi eyodwa online ifakiwe kwisaziso, hlela uhlu lwabamele imisebenzi enjalo kuleyo sayithi.
3.) Khomba okubalulekile okuthi kwephula umthetho noma okuzoba yisihloko sokwephula umsebenzi, uwususe noma uzovinjwa, nolwazi olwanele ukusenza sikwazi ukuthola lokho okuqukethwe.
4.) Imininingwane eyanele ukusenza sikwazi ukuxhumana neqembu elikhononda, njengekheli, inombolo yocingo, kanye (uma kukhona) ikheli le-imeyili lapho umuntu okhalazayo angaxhumana naye.
5.) Isitatimende Iqembu elikhonondayo likholelwa ngobuqotho ukuthi ukusetshenziswa kwezinto ezibonakalayo ngaphandle kwesikhalazo akugunyaziwe ngumnikazi we-copyright, umenzeli wakhe noma umthetho.
6.) Imininingwane esesazisweni sesaziso ichanile futhi iyajeziswa ngecala lokuzenzisa, okukhombisa ukuthi ummangali wagunyazwa ukuthi enze egameni lomnikazi welungelo elikhethekile okusolwa ukuthi linophuliwe.
Ikheli le-imeyili: web [at] zdgov.com.